Roobow Argagixiso ayuu u xiran yahay miyaa? | KEYDMEDIA ONLINE
Bartamihii bishii 8-aad ee 2017, Mukhtaar Roobow, oo ay ilaalinayaan ciidamo ka tirsan kuwa NISA, ayaa warbaahinta kula hadlay hotel ku yaala magaalada Muqdisho, wuxuuna caddeeyay in xubinnimada Al-Shabaab uu ka baxay 5 sano iyo 7 bilood ah, xilligaas, isla-markaana uu wadahadallo kula jiro hoggaanka dowladda.
Kaliya Zakariye ma aha; Farmaajo, wuxuu darajeeyay, Farxaan Maxamuud Aadan [Qaroole], kaas oo hore uga tirsanaa Al-Shabaab, wuxuuna u adeegsaday xasuuqii Baydhabo ka dhacay xilligii doorashada, dagaalladii Dhuusamareeb, Guriceel ee ka dhanka ahaa ASWJ, dagaalkii mudoo kordhinta ee caasimadda, duullaankii mucaaradka iyo caburinta shacabka Muqdisho.
Sidoo kale, ku dhawaad shanta sano ee Farmaajo, Madaxtoyada ku jiro, wuxaa xilka Agaasimaha Guud ee Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, hayay, Col. Mohamed Adam Kofi, kaas xilliyo kala duwan shaashadaha ka soo muuqday isagoo garabka ku haya Mukhtaar Roobow, markaas oo ay ka wada-tirsanaayeen kooxaha ka soo hor jeeda dowladnimada.
Farmaajo, wuxuu xilal iyo darajooyin ciidan ku tixay xubno fara badan oo kasoo diga rogtay Al-Shabaab, wuxuu maamuusay shaqsiyaad hortiis iyo gadaashiis u soo wareegay dhanka dowladda, hadaba waa maxay danbiga aysan Zakariye, Farxaan, Koofi iyo kuwa la mid ka ah aysan galin ee Mukhtaar kaligiis loo ciqaabay?
Farmaajo, waxaa la taliye amni u ah, Qabqable, Maxamed [Moorgan], oo kumanaan qof gacantiiisa ku maqan yihiin, isla-markaana dhacay dhamaan xoolihii reer Bay 1991-kii iyo Fahad Yaasiin oo ah aabaha argagisada Soomaaliya, halka uu Ciidanka XDS u hoggaamiyo Maxamed Biixi, oo ka mid ah dagaal oogayaashii xasuuqa geystay. Yaa danbi badan Morgan iyo Mukhtaar?.
FG: Qooraalkaan u jeedkiisu maahan in Mukhtaar Roobow, uusan lahayn wax danbi ah, maadama aysan jirin Maxkamad la soo taagay oo danbi la’aan ka dhigtay, hayeeshee, waa muujinta inuu u xiran yahay dano siyaasadeed, loona beegsaday damaciisa ku aaddan qabashada xilka MW, KGS.
Xarigga Mukhtaar, wuxuu qeyb ka ahaa qodobbo dhowr ah oo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, laga filayay inuu sida ay u kala horreeyaan u kala qaad qaado, hayeeshee, ma dhicin oo indhaha ayuu ka dabooshay.
Golaha Midowga Musharixiinta ayaa dhankooda ka gaabiyay in ay cadaadiskooda siyaasadeed ku daraan raadinta xuquuqda Mukhtaar, waxaase la rumeysan yahay inuu bannaanka ku imaan doono is-badellada siyaasadeed ee dhawaan la filayo.